Ikharavani yokhuni endaweni yemvelo - I-Airbnb
Ikharavani yokhuni endaweni yemvelo
Borée, Auvergne-Rhône-Alpes, i-France
Iqhugwane likamalusi ibungazwe ngu-Gaëtan
U-Gaëtan Ungumbungazi ovelele
Idalulwa eningizimu futhi izungezwe phakathi kwamadwala entaba-mlilo yasendulo, uzojabulela i-panorama ebabazekayo kukharavani yokhuni ehlotshiswe ngokucophelela futhi efakwe kahle.
Woza uzojabulela ukuzola nokuphumula, kufakwe ngokunethezeka phakathi kwemvelo ecebile nehlukahlukene, endaweni yemvelo neyesifunda i-Geopark yezintaba ze-Ardèche endaweni yokuphakama engu-1350m, phansi kwe-Mont Mezenc ne-Gerbier de Jonc.
I-trailer encane yokhuni itholakala ekugcineni kwesizinda sethu. Uzofika kuyo ngezinyawo ngendlela engaba amamitha ayi-100, ukusuka endaweni yakho yokupaka yangasese.
I-140 double bed ephakanyisiwe kanye namafasitela amaningi azokuvumela ukuthi ujabulele indawo futhi kungani ungababazi ukuphuma kwelanga nokuhlukaniswa kwayo kwemibala ngaphezu kwe-Alps. I-trailer yethu inikwa amandla kagesi. Ifakwe i-gas hob, ifriji encane kanye nezitsha zasekhishini.
Izindlu zangasese ezomile zingaphandle, ibanga elingangetshe ukusuka kunqola. Okunye okutholakalayo, ishawa ngamanzi ashisayo nosinki omncane.
Siku-1km ukusuka ku-GR7 kanye nase-Grande Traversée de l'Ardèche trail. Eminye imizila eminingi iqala e-Borne futhi ikunikeza ukuhamba ngokubukwa okuhle.
Kunzima ukutholakala enhliziyweni yemvelo kunalapha. I-hamlet eseduze iqhele ngamakhilomitha ambalwa. Izindlela eziningi ziqala ku-trailer futhi zikuvumela ukuthi ufinyelele ngokushesha iziqongo futhi ujabulele ukubukwa okuyingqayizivele nokumangalisayo. Uzophumula eduze ngangokunokwenzeka ezinhlobonhlobo zezitshalo nezilwane ezilondoloziwe. Lalela ... ama-groundhogs asondelene kakhulu!
Uhlelo lwethu alusivumeli ukuthi sazi ukuthi sizobe sikhona yini lapho ufika noma lapho uhamba. Kodwa sihlala sikhona ukuze siphendule imibuzo yakho.
Hlola ezinye izinketho ezise- Borée namaphethelo